स्वाव परिक्षणमा पालो पर्खिदै - Pradesh Today
Homebreaking-newsस्वाव परिक्षणमा पालो पर्खिदै
दाङ, २९ जेठ । दाङका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका करिब २ हजार ५ सयजनाले रिपोर्ट पर्खिरहेका छन् । भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाको कोरोना जाँचका लागि स्वाव संकलन भएपनि स्वाव जाँचमा ढिलाइ भएको छ ।
जेठ २७ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार दुई हजार ४ सय १९ जना रिपोर्टको पर्खाइमा रहेका छन् । स्वावको समयमै जाँच नहुँदा उनीहरू थप मानसिक समस्या पर्न थालेका छन् ।
‘क्वारेन्टाइनमा बसेको करिब १० दिन जति हुन थाल्यो, स्वाव संकलन भएको पनि एकसाता भयो तर रिपोर्ट आएको छैन्’ बंगलाचुली गाउँपालिकाले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका एक पुरूषले भने– ‘स्वाव जाँचमा ढिलाइ हुँदा झन् मानसिक समस्या थपिने गरेको छ ।’
प्रतिष्ठानमा ४ हजार बढी स्वाव थुप्रिएर बसेको छ। दाङमा दैनिक सरदर ५ सयजनाको स्वाव संकलन हुने गरेपनि प्रतिष्ठानमा २ सयमात्रै स्वाव जाँच हुने गरेको छ।
स्वाव जाँच हुने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एउटा मात्रै मेसिन हुँदा रिपोर्ट आउन करिब एकसाता लाग्ने गरेको छ । प्रतिष्ठानमा दाङसहित रूकुम, रोल्पा, बाँके, कपिलवस्तु,
नवलपरासी लगायतका ठाउँबाट स्वाव जाँचका लागि आउने गरेको छ । अन्य जिल्लाबाट पनि स्वाव जाँच आउने गरेका कारण पनि प्रतिष्ठानमा ४ हजार बढी स्वाव थुप्रिएर बसेको छ ।
दाङमा दैनिक सरदर ५ सयजनाको स्वाव संकलन हुने गरेपनि प्रतिष्ठानमा २ सयमात्रै स्वाव जाँच हुने गरेको छ । जसले गर्दा प्रतिष्ठानमा स्वाव दैनिकजसो ४ देखि ५ सयसम्म स्वाव पालोमा पर्खेर बस्ने गरेको छ ।
स्वावको रिपोर्ट आउन साता दिन लाग्दा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले रिपोर्ट कहिले आउँछ ? भनेर प्रश्न सोधिरहने गरेको सम्बन्धित गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले जनाएका छन् ।
‘स्वाव संकलनको मात्रै हुन्छ रिपोर्ट आउन करिब एकसाता लाग्ने गरेको छ’ बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले भने– ‘गाउँपालिकामा अहिले विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरेकाहरूले हाम्रो रिपोर्ट कहिले आउँछ भनेर सोधिरहन्छन्, के जवाफ दिनु ?
स्वाव जाँचमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय सरकारलाई व्ययभार पनि बढेको छ । ‘छिटो रिपोर्ट आयो भने नेगेटिभ आएकालाई घर पठाउने हुने थियो, संक्रमित रहेछन् भने उनीहरूलाई आइसोलेसनमा भर्ना गर्न सजिलो हुन्थ्यो,
जसले गर्दा सम्भावित खतराबाट बच्न सकिन्थ्यो’, अध्यक्ष वलीले भने– ‘ढिलो रिपोर्ट आउँदा व्ययभारसँगै जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ ।’
दाङमा जेठ २७ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार ५ हजार ३ सय ४२ जना २ सय क्वारेन्टाइनमा छन् । तथ्यांकअनुसार भारतबाट आउनेको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
भारतबाट दैनिक ३ सयको हाराहारीमा जिल्लामा थपिने गरेका छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकको संख्या थपिदै जाने तर आरडिटी, पिसिआर जाँचको गति सुस्त हुँदा समस्या रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोभिड–१९ फोकलपर्सन बिमल केसीले बताए ।
‘भारतबाट आउने नागरिकको संख्या थपिन्छ, स्वाव संकलन गर्ने काम पनि हुन्छ तर रिपोर्ट ढिलो आउँदा समस्या भएको छ’ उनले भने–‘जिल्लामा कम्तिमा पनि दुईवटा मेसिन भएको भए जाँचको गति बढ्न सक्ने थियो कि ?’
मंगलाबारसम्मको तथ्यांक अनुसार दाङका ५ हजार ६ सय २४ जनाको स्वाव संकलन गरिएकोमा ३ हजार २ सय ५ जनाको स्वाव जाँच भएको छ ।
जसमध्ये ३१ हजार १ सय १९ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने ८६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये २ जना जिल्ला बाहिर संक्रमण पुष्टि भएका हुन् ।
दाङका थप सातजनाले जिते कोरोना
दाङका सातजना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् । बेलझुण्डीको कोरोना विषेश अस्पतालमा उपचार गराइरहेका घोराहीका ३ र लमहीका ४ गरी सातजना संक्रमित निको भएका हुन् । निको हुनेमा ६ जना पुरूष र १ जना महिला रहेका छन् ।
जेठ १४ गते संक्रमण पुष्टि भएका उनीहरू बुधबार एकैदिन डिस्चार्ज भएका हुन् । अस्पतालमा १४ दिन बसेका उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज भएको अस्पतालका व्यवस्थापक हेल्थ असिस्टेन्ट दोर्णबहादुर वलीले जानकारी दिए ।
निको हुनेमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का २४ र २५ वर्षका दुई पुरूष, वडा नम्बर १० का ४० वर्षिय एक पुरूष रहेका छन् ।
त्यसैगरी लमही नगरपालिका वडा नम्बर १ र ४ का २६ वर्षका दुई पुरूष, वडा नम्बर ५ का ५० वर्षिय महिला र वडा नम्बर ६ का १८ वर्षिय पुरूष उपचारपछि निको भएको अस्पतालका प्रमुख डा. सर्वेश शर्माले बताए ।
यससँगै बेलझुण्डी अस्पतालमा उपचाररत ३२ जना डिस्चार्ज भएका छन् । अब अस्पतालमा अहिले ३७ जनाको उपचार भइरहेको छ भने एकजनाको थप उपचारका लागि बुटवल रिफर गरिएको छ ।